Izikhathi Ezine Zokubalekela ~ I-Real McCoy Cabin - I-Airbnb
Izikhathi Ezine Zokubalekela ~ I-Real McCoy Cabin
Tudor and Cashel, Ontario, i-Canada
Ikhaya elakhelwe ngaphansi komhlaba ibungazwe ngu-Jessica
I-Real McCoy's Getaway iyikhabethe lezingodo zomsedari elivulekile elisehlathini elingaku-Old Hastings Road kumahektare angama-40. Uma ufuna ukuphumula, ukhiphe futhi ube munye nemvelo uthole indawo ekahle. Ikhabethe lethu lidumile ngokuhlangana kabusha komndeni nabangane, i-ATV noma i-Snowmobile Excursions. Ukuhamba ngeqhwa noma ukuhamba ngezinyawo. Jabulela ikhishi eligcwele, i-BBQ, iSatellite, Igumbi lokugezela langaphakathi/ishawa, umgodi womlilo, inqaba yesihlahla sezingane kanye nomgodi wesicathulo samahhashi. Le ndawo ayikho emanzini. Ukubhukuda Okungalungile kuwuhambo lwemizuzu eyi-10-15 kuphela.
Ikhabethe lethu lezingodo elibanzi lihlala endaweni engaphezu kwamahektha angama-40 e-Woodland nesibhakabhaka esivulekile. Sinamagumbi okulala amahlanu esewonke. Amakamelo okulala amane endaweni ephezulu enemibhede emibili ekamelweni ngalinye. Umbhede owodwa wendlovukazi yangasese esitezi esikhulu. Osofa ababili, isihlalo esithokomele sikaGogo uMcCoy kanye ne-futon eyodwa egumbini lokuhlala elikhulu. Sinekhishi eligcwele elinazo zonke izinsiza. Itafula lekhishi lesitayela sebhentshi elikhulu elilungele ukudla kwakusihlwa komndeni noma ubusuku begeyimu. Isitezi esingaphansi esikuvumela ukuthi udonse amabhayisikili e-ATV/izimoto eqhweni/ezingcolile ungene noma uphume esimweni sezulu noma indawo yokudlala umculo ebusuku ukuze ungavusi izingane. Sinendawo yokugezela eyodwa yasendlini/ishawa. Ngethemba ukuthi usukulungele Ukujabulela isikhumba esithambile ngemva kokujabulela amanzi emvula eshawa angaphakathi endlini. "Ingcono kakhulu"
Jabulela umpheme ongaphambili uhlezi ngemva kokuhamba ekuseni kakhulu kunokujabulela ikhofi lakho lasekuseni kuvulandi noma ungalangazelela ukulalela umsindo wemvelo ngenkathi unezingxoxo zasebusuku.
Izindlela ezimbalwa ongakhetha kuzo ezizungeza indawo yethu. Kanye nomgodi omkhulu womlilo we-Bon wokwenza ama-s'mores nesibhakabhaka esikhulu esivulekile ukuze ubuke inkanyezi nalabo obathandayo.
Le ndawo inhle kakhulu ukuze ubuyele enjabulweni elula yemvelo. Kusele imizuzu embalwa ukuthi sikwazi ukugxumela ku-ATV nasezindleleni ezihamba eqhweni. Uma ufuna ubumfihlo lena indawo enhle yomndeni nabangane !!!
Siyajabula ngokuthi usitholile futhi sibheke ngabomvu ukuxhumana nawe kuze kube usuku lwakho lokufika. Sizotholakala ukuze sikuhlangabeze ngosuku lokuhlala kwakho ukuze sikunikeze ukugijima ngokushesha kwekhabethe lethu emahlathini/empahleni. Kanye nokukunikeza izikhombisi-ndlela eziya kuwo wonke amagugu amancane afihliwe abantu bendawo kuphela abakwaziyo.
Siyajabula ngokuthi usitholile futhi sibheke ngabomvu ukuxhumana nawe kuze kube usuku lwakho lokufika. Sizotholakala ukuze sikuhlangabeze ngosuku lokuhlala kwakho ukuze sikunikeze…
Hlola ezinye izinketho ezise- Tudor and Cashel namaphethelo